Noraviravizany vola 6 tapitrisa ariary ny zandary ho raharaham-pihavanana. Resin’ny mpitandro filaminan’ny kaompanian’Ambohidratrimo ny kolikoly fa niroso tamin’ny fanamborana izy ireo, raha ny vaovao ofisialin’ny zandary. Voalazan’ny fianakavian’ny lasibatra fa efa saika voasambotra ny faran’ny herinandro teo izy io fa ny vadiny no namoaka azy tao am-baravarankely Tsy nanaiky hatramin’ny farany tamin’ny fanolanana ilay tovovavy araka ny fampitam-baovaon’ny havany na notereny sy nodarohany ary nodorany aza. Soa ihany fa nisy ilay tovovavy namany afaka niantso fokonolona. Ankoatra ny toerana izay an-kodahoda sady akaiky fasana teny Andakana, ary ny laharan’ny fiara efa nalany, nahitana zava-maranitra koa tao anatin’ilay fiara tsy mataho-dalana, raha ny fampitam-baovaon’ny fianakaviana hatrany.
Tsy mpifankatia velively izy ireo, manaporofo izany ny resaka miafina nifaovan’izy ireo tao anaty “facebook”, hoy ny renin’ilay tovovavy. Ny fampitam-baovaon’ny zandary no nilaza fa hiakatra fampanoavana anio ny raharaha raha vita ny famotorana. Milaza tsy hanaiky lembenana hatrany ny fianakavian’ny lasibatra, indrindra amin’ny raharaham-pitsarana.